साना किसान कृषि सहकारी संस्था दिगम्बरपुरको १८औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न – Shirish News
महेन्द्रनगर- धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ९ दिगम्बरपुर स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.कोे १८औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. दिगम्वरपुरका अध्यक्ष ईन्द्रकुमार महतोको अध्यक्षता तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख योगेन्द्र पजिंयारको प्रमुख आतिथ्यमा साधारणसभा मनाइएको हो । सो अवसरमा धनुषाधान नगरपालिकाकी उपमेयर विद्यादेवी भुजेलको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
संस्थाको नजिकै रहेको स्कुलका प्राङ्गणमा भएको साधारणसभाको अवसरमा संस्थाको वार्षिक आयव्यय र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको संस्थाका प्रबन्धक चन्द्र किशोर सिंहले जानकारी दिएका छन् । संस्थाले यस आर्थिक वर्ष २०७७ फाल्गुन मसान्तसम्ममा २ करोड २० लाख ८६ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ जम्मा आम्दानी गरेको छ भने ४४ लाख ९९ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तै संस्थाको असुली दर ९६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । संस्थाले यस वर्ष १६ करोड ३६ लाख ७६ हजार ऋण लगानी गरेको छ भने १५ करोड ४० लाख १८ हजार असुली गरेको संस्थाको आयव्यय विवरणमा उल्लेख छ ।
यता १८औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा संस्थामा आबद्ध कृषकहरुलाई ३५थान कोदालो वितरण गरिएको छ भने सबै भन्दा बढी शेयर बचत भएका ४ जनालाई पंखा प्रदान गरिएको छ । यस्तै १८ जना उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई स्टेशनरी सामग्री सहित सम्मान गरिएको छ भने संस्थामा शेरधनीहरुलाई १ हजारका दरले शेयर लाभान्स वितरण गरिएको छ । साधारणसभाके अवसरमा स्थानीय त्रिलोकीनाथ युवा क्लवलाई ३५ थान टिर्सट प्रदान गरिएको संस्थाले जनाएको छ । साधारणसभाको अवसरमा संस्थाको संचालक समितिका पदाधिकारी, शेयरधनी, बचतकर्ता लगायत हजारौं स्थानीयहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।